Ukumaka ingxenye - I-OUZHAN TRADE (SHANGHAI) CO., LTD
Ukumaka ingxenye kuyindlela ebiza imali yokwengeza ama-logo noma ukubhala ngezifiso kumiklamo yakho futhi kuvame ukusetshenziselwa ukumaka ingxenye yangokwezifiso ngesikhathi sokukhiqizwa okugcwele.
● Faka isicelo ezintweni ze-elekthronikhi, amasekhethi ahlanganisiwe (IC), izinto zikagesi, ukuxhumana kwamaselula, imikhiqizo yehadiwe, izesekeli zamathuluzi, imishini yokunemba, izibuko namawashi, ubucwebe, izingxenye zezimoto, izinkinobho zepulasitiki, izinto zokwakha, amapayipi e-PVC, imishini yezokwelapha nezinye izimboni .
● Izinto ezisetshenziswayo zifaka phakathi: izinsimbi ezivamile kanye nama-alloys (i-iron, ithusi, i-aluminium, i-magnesium, i-zinc nezinye izinsimbi), izinsimbi ezingavamile kanye nama-alloys (igolide, isiliva, i-titanium), ama-oxide ensimbi (zonke izinhlobo zama-oxide ensimbi amukelekile), i-Surface ekhethekile ukwelashwa (i-phosphating, i-aluminium anodization, i-electroplating surface), impahla ye-ABS (izindlu zikagesi, izidingo zansuku zonke), uyinki (okhiye abasobala, imikhiqizo ephrintiwe), i-epoxy resin (ukufakwa kwengxenye ye-elekthronikhi, ungqimba lwe-insulation).
Ukumaka umkhiqizo kufaka phakathi ukumakwa kwe-laser ne-cnc umbhalo.
● Ukumakwa kwe-Laser kuyindlela yokumaka esebenzisa i-laser eneji enamandla ephezulu ukukhipha imisebe yendawo umsebenzi wokuphefumula okungaphezulu noma ukukhiqiza ukusabela kwamakhemikhali kokushintsha kombala, ngaleyo ndlela kushiye uphawu lwaphakade.
● Umgomo oyisisekelo wokumaka i-laser ukuthi ugesi we-laser oqhubekayo owenziwa ngamandla wenziwa yi-laser generator, futhi i-laser egxile isebenza ezintweni zokuphrinta ukuze zincibilike khona manjalo noma zivuselele lokho okubonakalayo. Ngokulawula indlela yelaser ebusweni bento, Yakha amamaki wokuqhafaza adingekayo.
● Ukumakwa kwe-Laser kubonakala ngokungaxhumani okungathintwa, okungamakwa kunoma iyiphi indawo enesimo esikhethekile, futhi okokusebenza ngeke kukhubazeke futhi kudale ukucindezeleka kwangaphakathi. Kufanelekile ukumaka insimbi, ipulasitiki, ingilazi, i-ceramic, ukhuni, isikhumba nezinye izinto.
● I-Laser ingamaka cishe zonke izingxenye (njengama-piston, izindandatho ze-piston, ama-valve, izihlalo ze-valve, amathuluzi wehadiwe, izinto ezihlanzekile, izinto zikagesi, njll.), Futhi amamaki ayamelana nokugqoka, inqubo yokukhiqiza kulula ukuyisebenzisa, futhi izingxenye ezimakiwe zine-deformation encane.
● Kukufanele ukusika, ukubaza okuvela ngakubili nokuqoshwa ngakuthathu ezintweni ezahlukahlukene eziyizicaba. Ngaphezu kwalokho, imisebenzi esemqoka kanye nezinzuzo zomshini wokuqopha insimbi osebenza ngemisebenzi eminingi: onamandla, owenzelwe izinhloso eziningi, noma ngabe ukwenza ubhedu, insimbi engagqwali, i-titanium, i-aluminium nokunye ukubhala kwensimbi, amaphethini wokuqopha nobuciko obuhle bokuqhafaza , njll. Kwenziwe. Ngenxa yomsebenzi wokuqopha onamandla wokufaka lo mshini, into yokusebenza ingacutshungulwa isuswe kwizimpawu ezinefomethi enkulu iye ezivikelweni zesifuba ezincane naseziqeshini zamagama.
● Ukuqoshwa kwe-CNC kuyinhlanganisela yokubhola nokugaya ngokwemigomo yokucubungula. Ukukhethwa okulungile kwezinto ze-CNC zokuqopha nokusetshenziswa okufanele kobuchwepheshe kungaba yiphrojekthi enenzuzo ephezulu ekutshalweni kwemali. Njengoba izinto ze-CNC zokuqopha zivezwa ngamaphethini ayinkimbinkimbi, ubujamo obuyingqayizivele, nemikhiqizo emihle eqediwe, kuyilapho imishini yokuqopha ye-CNC ikakhulukazi iyizakhiwo ezinesisindo esincane, lokhu empeleni kukhawula imodi yokusebenza yokuqoshwa kwe-CNC njenge: "ukugaya okusheshayo ngamathuluzi amancane". Eqinisweni, lokhu futhi Kuyi "inzuzo yobuchwepheshe" yokuqoshwa kwe-CNC, futhi isizathu ukuthi ukuqoshwa kwe-CNC kwenza "ibhizinisi elingenakucutshungulwa ngamathuluzi amakhulu avamile". Ngenxa yezinzuzo eziyingqayizivele zobuchwepheshe bokuqoshwa kwe-CNC, ukuqoshwa kwe-GNC kuyasiza kakhulu ezimbonini ezilandelayo: imboni yokuqopha imboni kanye nomkhakha wokukhangisa oqoshiwe.